ဟန်းဆက်တစ်ခုကို ၁၀၀ ကျပ်နဲ့ ရောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဟန်းဆက်တစ်ခုကို ၁၀၀ ကျပ်နဲ့ ရောင်း
ဟန်းဆက်တစ်ခုကို ၁၀၀ ကျပ်နဲ့ ရောင်း
Posted by student on May 5, 2012 in Copy/Paste | 14 comments
မန္တလေးက တယ်လီဖုန်းပစ္စည်းရောင်းတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်က ကျပ် ၁၀၀ တန်လက်ကိုင်ဖုန်းေ၇ာင်းပေးတာကြောင့် ဆိုင်လာ ဈေးဝယ်သူများ များပြားလွန်းကာ လမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေ ဖြစ်ပြီး ယာဉ်ထိန်းရဲက လမ်းရှင်းပေးရသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တန်ဖိုးနဲ ဖုန်းတွေ မျှော်နေကြတဲ့ ပြည်သူတွေအကြိုက် ကျပ်၅၀၀၀ တန်ဆင်းကဒ်တွေ မပေါ်လာသေးပေမယ့် မန္တလေးမြို့၊ ၇၈ လမ်း၊ ၃၇ လမ်းနဲ့ ၃၈ လမ်းကြားက အသစ်ဖွင့်တဲ့ Good Mobile ဖုန်းဆိုင်က ဟန်းဆက်တစ်ခုကို ၁၀၀ ကျပ်နဲ့ ရောင်းပေးလို့ ဝယ်ယူလိုသူတွေ များပျားလွန်းကာ ဆိုင်ရှေ့ လမ်းပေါ်မှာ ယာဉ်နှစ်ထပ်၊ သုံးထပ်ပိတ်ဆို့ရပ်ကာ အားပေးကြသည် အထိအားပေးတာ တွေ့ရပါတယ်။
အိုင်ဒီယာကတော့ လန်ထွက်နေဒါဘဲ အဟေး..အဟေး..
ပြောင်စပ်စပ်နဲ့စော်ဂါးတာလား ဂစားတာလား..
ဘာပဲဖစ်ဖစ် နာမည်တော့ ကြီးသွားသဟ
ဟုတ်ပဗျား ။ ဘယ်သူတွေ ကံထူးသွားလဲတော့ မသိရသေးဘူးဗျ ။ ဆိုင်က ၁၀နာရီမှာဖွင့်ရောင်းမယ့်ဟာ ကို ၉နာရီလောက်ကတဲက လူတန်းကြီးလူအုပ်ကြီး နဲ့ လမ်းပိတ်သွားသတဲ့ဗျ ။ သူ က စလိုက်တဲ့အခါ ကျန်တဲ့ ဆိုင်တွေပါ လိုက်လုပ်ကြမှာမို့ ၊ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုပါဘဲ ။
အားကျပြီး ကျောက်စိမ်းတစ်တုံး တစ်ရာနဲ့ပေးမို့ လားဂျ
ကျောက်စိမ်းတုံးသာ ပေးမယ်ဆိုရင်ဖြင့် သံတွဲ့ ကနေ ရရာစီး၍
တစ်ရာတန် တရုတ်စက် တစ်ရက်တည်း စုတ်မယ့် ဟာတွေနေမှာ..
လူတွေ သိပ်ပြီး စိတ်မပါတော့တာကို သိလို့ ..
နည်းစနစ် ပြောင်းပြီး ..
တစ်လုံးတစ်ရာ ဆိုပြီး လုပ်ချလိုက်တာနဲ့ တူတယ် ..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အိုင်ဒီယာကတော့ တော်တော်လန်းတယ် ..
တစ်ခါတည်း ဆိုင်ပါ နာမည်ကြီးပဲ … :D
ဟန်းဆက်ဆိုတာ ဘာကိုခေါ်သဒုံးဗျာ ဒဂယ်မသိလို့ဘာ
ဘာလို့ခေါ်သဒုံး မိုဘိုင်ဆိုလား အဲ့ဒါကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်း ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်
ပြီးရင် SIM Card ( နံဘတ် ) တစ်ခုကောက်ထည့်လိုက် ကြိုက်သလောက်ဆက်
အမှန်အကန်သမားတွေကတော့ နံပါတ် တစ်ခုတည်းသုံးသပေါ့
ကျုပ်လို ရေမြောကမ်းတင်ကောင်ကတော့ နံပါတ်တွေအောလပုံဘဲ
တစ်ခါတစ်လေ တစ်လတည်းမှာ နံပါတ် နှစ်ခုလဲတယ်
တစ်ခါတစ်လေဆို ဖုံးထည်းမှာ SIM Card လုံးဝမထည့်ထားဘူး
ဖုံးရှိတယ် နံပါတ်မသုံးဘူး သီချင်းနားထောင်တယ် ဘာညာကွိကွ MP4 တွေကြည့်တယ်
အဲ့သည်လောက် အဆင့်အတန်းမြင့်ဒါ :D
သုံးလုံးထဲကတော့နဲတာပေါ့။ အနဲဆုံး လာစောင့်တဲ့သူတွေရဲ့ဝီရိယကိုထောက်ထားသောအားဖြင့် ၁၀ လုံးတော့ဖြစ်သင့်တာပေါ့။
တကယ် ပေးတာဆိုတော့ ကောင်းတာပေါ့။
စိတ်ကူးကတော့ တော်တော် ကောင်းတယ်နော်။
အခုတောင် ဖေ့ဘွတ်မှာ စူပါက တနေ့ တသိန်း ကံစမ်းမဲ ပေးနေတယ်။
ဘာစည်းကမ်းချက်နဲ့ ပေးလဲတော့ မသိ..
ကိုဂီကို မေးကြည့်ရမယ် သူကမာကတ်တာ ဆိုတော့ အခုအကွက်က ဘယ်လို
ဘာတဲ့ ၃လုံးတည်း တဲ့….
ဟုတ်ကဲ့ ..တလုံး ၃သောင်းတန် တဲ့ ဟန်းဆက် ၃လုံး ဆိုပါစို့…
အဲ့ ..ကုန်ကျစရိတ် ၁သိန်းအောက်ပဲရှိတယ်….
ငွေ ၁သိန်း နဲ့ မြန်ပြည်တခွင် ပြဲပြဲစင် အောင် လူသိများ သွားတယ်မဟုတ်လားဗျာ…
Viral marketing ကို သုံးသွားတာပါ… SNS တွေ CJ တွေ ခေတ် ဆိုတော့